DANJIRE YOONIS “Beljamka kuma arag dad Soomaaliyeed oo isku mowqif ah” - Somnieuws.com
DANJIRE YOONIS “Beljamka kuma arag dad Soomaaliyeed oo isku mowqif ah”
Yoonis Yaasiin Haashi [Ooga-cadde] oo ah safiirka Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya, ayaa ka dalbaday jaaliyadaha Soomaalida ee ku dhaqan dalka Nederlands in ay ka qeybqaataan dib u dhiska & dayactirka gurigii martida ee ay safaaradu laheyd,
Danjiraha, oo Axadii kula hadlayay jaaliyadaha Soomaalida Nederland Magaalada Denhaag, wuxuu ammaanay isku xirnaanta Soomaalida waddankaasi ku dhaqan, isaga oo dhinaca kale na ku tilmaamay Soomaalida Beljamka in aysan laheyn jaaliyad ay ku mideysan yihiin.
“Guriga martid ee safaaradu leedahay wuxuu u baahan yahay dayactir, waxaa ka soo dacwooday dadkii deriska la ahaa markii geedihii ku yiilay gudaha & hareeraha dhismaha ay baxeen, haddii aan si degdeg ah lagaga howlgelin waxaa suurtagal ah inuu gacanta ka baxo” Ayuu yiri Danjire Yoonis, isaga oo intaasi sii raaciyay in dhismahaasi aanu aheyn mid shaqsi leeyahay ee uu yahay astaan Qaran.
“Agab badan oo safaarada yaala waxaa ku deeqay Jaaliyada Soomaaliyeed ee Nederland” Ayuu yiri Danjiraha, wuxuuna intaasi raaciyay.
” Beljamka, kuma arag dad Soomaaliyeed oo isku xiran, waxaan idinku boorinayaa inaad midnimadiina xoojisaan”
C/qaadir Cali [Nuune] oo ka mid ahaa aqoonyahanadii ka hadlay kulankaasi ayaa ka dalbaday Danjire Yoonis inuu wax ka qabto Soomaalida ka soo qaxeysa dagaalka ka soconaya waddanka Ukraine, loona fududeeyo warqadaha ay u baahan yihiin.
“Annagu, jaaliyad ahaan waxaan wadnaa dedaalo ku saabsan sidii ardayda Soomaalida ee ka soo carayaya dagaaladaasi deganaansho loogu weydiin lahaa dowladda Nederlands, maadaama aan loo aqoonsan karin qaxooti oo dalka Ukrain ay ku joogeen viisooyin waxbarasho” Ayuu yiri C/qaadir Nuune.
Kulankan, waxaa gogoshiisa dhigay dalladda FSAN oo ah dallad ay ku mideysan yihiin ururo Soomaaliyeed, waxaanna dadkii ka hadlay ka mid ahaa Guddoomiyaha FSAN Cali Waare, Aqoonyahan Cali Yaxye & xubno kale oo hormuud u ah Jaaliyada Soomaalida.
Danjire C/raxmaan Diinaari & Macalin Yuusuf Xassan oo ka hadlay qoddobo muhiim u ah saxaafadda [VIDEO]